လုပျငနျးခှငျအတှငျး မိမိကိုယျမိမိယုံကွညျမှုနညျးခွငျးရဲ့ နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးမြား။ – SoShwe
Home/Education/လုပျငနျးခှငျအတှငျး မိမိကိုယျမိမိယုံကွညျမှုနညျးခွငျးရဲ့ နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးမြား။
လုပျငနျးခှငျအတှငျး မိမိကိုယျမိမိယုံကွညျမှုနညျးခွငျးရဲ့ နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးမြား။
So Shwe February 16, 2022	Education, LifeStyle Leaveacomment
အောငျမွငျပွီးနညျးစနဈကတြဲ့ လုပျငနျးအဖှဲ့အစညျးတဈခုကို တညျထောငျဖို့အတှကျ အဆိုပါလုပျငနျးက အကွီးအကဲတှရေဲ့ အရညျအသှေးပွညျ့ဝခွငျးက အရေးကွီးသလို အဆိုပါလုပျငနျးမှာ တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ ဝနျထမျးတဈဦးခငျြးစီရဲ့ အရညျအသှေးပွညျ့ဝဖို့ကလညျး အရေးကွီးပါတယျ။ ဝနျထမျးတဈဦးခငျြးစီအနနေဲ့လညျး မိမိရဲ့ရာထူးအရ လုပျငနျးတာဝနျတှကေို အမှားနညျးနညျးနဲ့ အောငျမွငျပွီးမွောကျအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျဖို့အတှကျ အရေးကွီးဆုံးကတော့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အရညျအသှေးပွညျ့မှီခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
စိတျပညာပိုငျးဆိုငျရာဂြာနယျတဈခုမှာ ဖျောပွထားတဲ့ စိတျပညာရှငျတှရေဲ့ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြအရ လုပျငနျးခှငျအတှငျး မိမိရဲ့လုပျငနျးတာဝနျတှကေို ထမျးဆောငျရတဲ့အခါ ယုံကွညျမှုကငျးမဲ့နခွေငျးက ပငျကိုယျအရညျအသှေးကို ထိခိုကျစနေိုငျကွောငျး ဆိုထားပါတယျ။ မိမိရဲ့ရာထူးအလိုကျ တာဝနျတှကေို ပွီးမွောကျအောငျလုပျဆောငျရာမှာ အမှားအယှငျးတခြို့ ကြူးလှနျမိတာကွောငျ့ပဲဖွဈဖွဈ လုပျငနျးခှငျက အထကျလူကွီး (သို့) လုပျဖျောကိုငျဖကျနဲ့ကတောကျကဆဖွဈပွီး ဆကျဆံရေးကြဲသှားတာကွောငျ့ပဲဖွဈဖွဈ ၊ မိမိရဲ့လုပျနိုငျစှမျးအပျေါ ယုံကွညျမှုနညျးပါးတာမြိုး ဖွဈတတျကွပါတယျ။ ဥပမာ – မိမိရဲ့လကျရှိရာထူးကို အမှားအယှငျးမရှိ ရရှေညျစှမျးဆောငျနိုငျပါ့မလား? ဆိုတဲ့ ကိုယျ့ရဲ့လုပျနိုငျစှမျးကို သံသယဝငျလာတာမြိုးပါ။
အလုပျမှာ မိမိရဲ့လုပျနိုငျစှမျးအပျေါ ယုံကွညျမှုနညျးပါးလာခွငျး (သို့) ယုံကွညျမှုကငျးမဲ့လာခွငျးက နောကျထပျလုပျငနျးတာဝနျတှကေို အောငျမွငျစှာ ထမျးဆောငျနိုငျဖို့အတှကျ အတားအဆီးတဈခု ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ မိမိရဲ့လုပျနိုငျစှမျးအပျေါ ယုံကွညျမှုမရှိတဲ့ ဝနျထမျးတှဟော လုပျငနျးခှငျဆိုငျရာ အမှားအယှငျးတှကေို မရညျရှယျဘဲ (သို့) သတိထားနတေဲ့ကွားထဲကနေ ပိုမိုပွုလုပျတတျကွတယျဆိုပွီိး ဖျောပွထားပါတယျ။
သွစတွေးလနြိုငျငံရဲ့ လုပျငနျးခှငျဆိုငျရာ စိတျပညာရှငျတှဟော မတူညီတဲ့လုပျငနျးခှငျမှာ မတူညီတဲ့တာဝနျတှကေို ထမျးဆောငျနတေဲ့ ဝနျထမျးပေါငျး ၁,၀၄၆ ဦးရဲ့ လုပျငနျးခှငျဆိုငျရာ အမူအကငျြ့တှနေဲ့ ယုံကွညျခကျြတှကေို အလေးပေးပွီး ၉ နှဈကြျောကွာအောငျ လလေ့ာခဲ့ကွပါတယျ။ လုပျငနျးခှငျအတှငျး မိမိရဲ့လုပျနိုငျစှမျးအပျေါ ယုံကွညျမှုနညျးပါးနတေဲ့ ဝနျထမျးတှဟော မိမိရဲ့လုပျနိုငျစှမျးအပျေါ ယုံကွညျမှုအပွညျ့အဝရှိတဲ့ ဝနျးထမျးတှနေဲ့ယှဉျရငျ စိတျခံစားမှုတညျငွိမျခွငျး၊ ညှိနှိုငျးရလှယျကူခွငျး၊ တာဝနျသိတတျခွငျး၊ အပေါငျးအသငျးဝငျဆံ့ခွငျးနဲ့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောဆိုဆကျဆံတဲ့အခါမြိုးတှမှော အားနညျးနတေတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး လုပျငနျးခှငျမှာ မိမိကိုယျကိုယုံကွညျမှု လြော့နညျးနတေဲ့သူတှဟော လုပျငနျးခှငျအပွငျဖကျ တကယျ့လကျရှိဘဝကို ရောကျလာတဲ့အခြိနျမှာလညျး မိသားစုဝငျတှေ၊ ခငျမငျရငျးနှီးတဲ့မိတျဆှတှေနေဲ့ ဆကျဆံတဲ့အခါမှာ အဆငျမပွဖွေဈလာတတျတယျလို့ ပညာရှငျတှကေ ဆိုထားပါတယျ။
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မိမိကိုယ်မိမိယုံကြည်မှုနည်းခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ။
အောင်မြင်ပြီးနည်းစနစ်ကျတဲ့ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို တည်ထောင်ဖို့အတွက် အဆိုပါလုပ်ငန်းက အကြီးအကဲတွေရဲ့ အရည်အသွေးပြည့်ဝခြင်းက အရေးကြီးသလို အဆိုပါလုပ်ငန်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အရည်အသွေးပြည့်ဝဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့လည်း မိမိရဲ့ရာထူးအရ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို အမှားနည်းနည်းနဲ့ အောင်မြင်ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးဆုံးကတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေးပြည့်မှီခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာဂျာနယ်တစ်ခုမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ စိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မိမိရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ရတဲ့အခါ ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေခြင်းက ပင်ကိုယ်အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။ မိမိရဲ့ရာထူးအလိုက် တာဝန်တွေကို ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်ရာမှာ အမှားအယွင်းတချို့ ကျူးလွန်မိတာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ငန်းခွင်က အထက်လူကြီး (သို့) လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့  ကတောက်ကဆဖြစ်ပြီး ဆက်ဆံရေးကျဲသွားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ မိမိရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းအပေါ် ယုံကြည်မှုနည်းပါးတာမျိုး ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ – မိမိရဲ့လက်ရှိရာထူးကို အမှားအယွင်းမရှိ ရေရှည်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါ့မလား? ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းကို သံသယဝင်လာတာမျိုးပါ။
အလုပ်မှာ မိမိရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းအပေါ် ယုံကြည်မှုနည်းပါးလာခြင်း (သို့) ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့လာခြင်းက နောက်ထပ်လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို အောင်မြင်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် အတားအဆီးတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ မိမိရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းအပေါ် ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဟာ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အမှားအယွင်းတွေကို မရည်ရွယ်ဘဲ (သို့) သတိထားနေတဲ့ကြားထဲကနေ ပိုမိုပြုလုပ်တတ်ကြတယ်ဆိုပြီိး ဖော်ပြထားပါတယ်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ စိတ်ပညာရှင်တွေဟာ မတူညီတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ မတူညီတဲ့တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၁,၀၄၆ ဦးရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အမူအကျင့်တွေနဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေကို အလေးပေးပြီး ၉ နှစ်ကျော်ကြာအောင် လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မိမိရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းအပေါ် ယုံကြည်မှုနည်းပါးနေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဟာ မိမိရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းအပေါ် ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့ ဝန်းထမ်းတွေနဲ့ယှဉ်ရင် စိတ်ခံစားမှုတည်ငြိမ်ခြင်း၊ ညှိနှိုင်းရလွယ်ကူခြင်း၊ တာဝန်သိတတ်ခြင်း၊ အပေါင်းအသင်းဝင်ဆံ့ခြင်းနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ အားနည်းနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လုပ်ငန်းခွင်မှာ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု လျော့နည်းနေတဲ့သူတွေဟာ လုပ်ငန်းခွင်အပြင်ဖက် တကယ့်လက်ရှိဘဝကို ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်း မိသားစုဝင်တွေ၊ ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ အဆင်မပြေဖြစ်လာတတ်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ဆိုထားပါတယ်။
Previous Post Malone တဈယောကျ မကျြနှာပျေါမှာတကျတူးတှထေိုးခဲ့ရတဲ့အကွောငျးရငျး။
Next စာသငျခနျးတှငျးသငျကွားရေးစနဈကို မယှဉျပွိုငျနိုငျသေးသညျ့ အှနျလိုငျးသငျကွားရေးစနဈမြား။